दुबईबाट चार्टर उडानमार्फत नेपाल आएका ९४ गर्भवतीबारे भ्रम–यर्थाथ ? – Jagaran Nepal
दुबईबाट चार्टर उडानमार्फत नेपाल आएका ९४ गर्भवतीबारे भ्रम–यर्थाथ ?
काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण खाडी लगायत देशहरुमा कार्यरत नेपालीहरुको रोजगार गुमेको छ । यो बीचमा सरकारले समस्यामा परेकाहरुलाई उद्धार अभियान चलायो । यस अन्तरर्गत गत शुक्रबार संयुक्त अरब एमिरेट्स (यूएई) को दुबईबाट पहिलो चार्टर उडानमार्फत १ सय ४८ जना नेपाली आफ्नो मातृभुमिमा आए ।
उनीहरु सबैजना नेपाल एयरलाइन्सको आरए २२९२ नम्बरको जहाजमार्फत आएका थिँए । फर्किएका सबै जना दूतावासको फारम भरेर प्राथमिकतामा परेका नेपाली श्रमिक हुन् । फर्किनेमध्ये १ सय १ जना महिला र ४७ जना पुरुष रहेका थिए । रोचक कुरा के भयो भने १ सय १ जना महिलामध्ये ९४ जना गर्भवती भेटिए ।
उडानमा १० जना बिभिन्न रोगका कारण बिरामी छन् भने १० जना रोजगारदाता भागेपछि अलपत्र नेपाली श्रमिक थिए । अन्य ३ जना भने जेष्ठ नागरिक पनि थिए । सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता, लगायत नेपाली मिडियाहरुले विभिन्न हेडलाइन राखेर समाचार प्रकाशन गरेपछि गर्भवतीको कुरा अलिक धेरै चर्चित भयो । सामाजिक प्रयोगकर्ताहरुले ब्यापक नकारात्मक सन्देश फैलाएको भन्दै एनआरएनए युएई उपाध्यक्ष पासाङ्ग शेर्पा लगायत अन्य धेरै आवाज बुलन्द गरेका छन् ।
शुक्रबार नेपाल फर्केका ९४ जना गर्भवती चेलीहरु यो महामारीको समयमा युएईको महंगो प्रसुती खर्च जोगाउन वा आफ्नै देशमा आफन्त परिवार माझ सुलभ प्रसुती र हेरचाह हुन्छ भनेर फर्केका वैधानिक गर्भवतीहरु भएको खुलासा भएको छ । पासाङ्ग शेर्पाका अनुसार २७ जनाका त श्रीमानहरु पनि संगै फर्केका छन । अन्यका श्रीमानहरु विमानस्थलसम्म छोड्न आएका थिए । बाँकी यूएईमै कार्यरत रहेको र भिजिट भिसामा श्रीमान् भेट्न यूएई पुगेकाहरु हुन् ।
आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे, ‘दुबई एयरपोर्टमा म स्वयं र बिकाश शाही सबै यात्रुहरुको सहजीकरणको लागि खटेका थियौँ भने हरेक यात्रुसंग हामीले आफै अन्तरक्रिया समेत गरेको हुनाले सामाजिक संजालमा देखिएको नकारात्मक टिप्पणीहरु आधारहिन भएको जानाकारी गराउनको साथै सबै विकृत मानसिकताको उपजका कारण लेख्ने टिप्पणीकारहरुको तुच्छ सोचलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जलीको लोप्पाले लोपारिदिएको जानकारी समेत गराउदछु ।’